Corona utachiwana: 252 apora | Apg29
Corona utachiwana: 252 apora
Vose arwara regai kufa!
Right ikozvino, 11.373 achirwara chete Corona utachiwana. Ivavo, 259 vakafa, asi 252 Makadzikinura!
Corona utachiwana muna Jonkoping
Nezuro Ndakaona kuti Sweden achangobva akagamuchira akasimbisa nyaya kwayo pamusoro coronavirus wokutanga, mukadzi ane 20 gore wevekare voga panguva County muchipatara Ryhov muna Jonkoping . Vaviri Vhidhiyo mhenyu ndakarera pamusoro Corona utachiwana. Pakati pezvimwe zvinhu, nei ivo unozvidzinga isu pamwe coronavirus?
Pakutanga, ndakafunga akanga kutyisidzira chaizvo uye mukuriswe. Zvose zvinoita Corona utachiwana haufi. Vaya vakafa vave multi-kurwara vanhu, kufanana vazhinji vevaya vakafa renguruve dzihwa makore mashoma apfuura. Zvino kuti coronavirus zviri mberi rinotanga inowanzotorwa pamwaka yokuSpain , izvo zvingaita kuti nemazana rufu Swedish . Kana kuti Anovhundutsira kwete vanhu uye vakaudza mupristi.
The-makore 20 mukadzi Jönköping ari muduku, zvichida simba, uye kwete kufa. Iye Saka muchapora nokukurumidza.
Right ikozvino, 11.373 achirwara chete Corona utachiwana . Ivavo, 259 vakafa , asi 252 Makadzikinura !
Hatidi vanotenda muna Jesu haana kurega kuva nokutya uye akazadzwa nokutya coronavirus. kuchengeteka kwedu kuri muna Jesu Kristu, chero zvinoitika.
Mwari achaponesa iwe kubva denda
Nezuro akadana Rune sekuru kwandiri. Nokuda coronavirus, akandipa rugwaro huru:
Pis 91: 5 chausingazotyi chinovhundusa usiku, kwete museve enhunzi masikati, 6 harisi dambudziko inofamba murima kana denda mupopoti masikati.
Nei tisingafaniri kutya mutendi muna Jesu? Munguva yapfuura ndima, iwe kuwana mhinduro:
Psalms 91: 1 Iye agere Highest patronage Garai pasi pomumvuri woWemasimbaose, 2 anoti: ". Jehovha ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, Mwari wangu, I ruvimbo" 3 Iye anofanira ndikurwire kubva mumusungo rwomuteyi uye kubva denda inoparadza . 4 With ake minhenga iye richakufukidza, pasi pamapapiro ake muchawana utiziro. Kutendeka kwake inhoo huru neduku.
Kana usina kugamuchira Jesu Kristu uye ndikabhabhatidzwa vakaponeswa saka zvechokwadi I dzinokurudzira kuti iwe uite saizvozvo. Unogona kugamuchira Jesu achinyengetera munamato uyu aronga kwazvo zvakananga kuna Jesu:
"Jesu, ndinokugamuchirai iye zvino uye kupupura iwe saIshe. Ndinotenda kuti Mwari akamutsa kubva kuvakafa. Mazvita kuti ndiri zvino kuponeswa. Ndinokutendai ndichikangamwira ini uye Ndinokutendai kuti ndava mwana waMwari. Amen. "